काकी को कालो पुती चिके - Indian Girls Nude XXX Images
काकी को कालो पुती चिके
यो तेतिखेर को घटना हो जुनबेला मैले एस.एल.सी एक्जाम दियी सकेको थिए। मेरो उमेर १७ वएको थियो। बुवा आमा ले मलाई काकी कहाँ ६ुत्ती बितौन जने वन्नुवयो। काका को घर चितवन म थियो। म पनि चितवन घुम्ने बिचार ले खुशी थिए। चितवन म पुग्द खेरी मलाई काका र काकी को माया खुब मिल्यो नमिलोस पनि कसरी मेरो काका मेरो बुवा को शाहओदर कन्६ो भाई हुनुहुन्थ्यो। म काका काकी लाई अंकल आन्टी वन्थे। आन्टी को उमेर ४० को हुदो हो तर पनि आन्टी निकै राम्री हुनुहुन्थ्यो। आन्टी अलिकती काली वयता पनि क्रीम ले गोरी लग्थ्यो।
झत्त हेर्दा ३० साल कि जस्तो लाग्दथ्यो शायद आन्टी ले कुर्त सुरुवल लगाउनले होल जवन देखिनु वको।ुहको तीन सन्तान वैसकेक थिए र हर सन्तान को २ साल जन्मा अन्तर थियो। हामी सव माथि च्याट म सुत्ने गर्थ्योउ त्यहाँ गर्मी को करण ले। कारीव बिहान् ४ बजे मेरो निन्द्रा खुल्थ्यो र तेतिखेर अली चिसो हुनाले म तल कोठा म आएर सुत्ने गर्थे। म अंकल कहाँ पुगेको कारीव ५ दिन पुगेको थियो। सव कुर नोर्मल थियो। (शुबी सिते)एक बिहान् को कुर हो। म सधैं झै बिहान् ४ एम म तल कोठामा सुत्न झरे। आन्टी पनि त्यो बिहान् म सगै झर्नु वयो। हामी दुबइ तल को कोठा म सुत्न आयोउ। काकी ले मलाई माया ले आफ्नो शरीर मलिश गर्न वन्नु वयो। यो काकी को बनी नै थियो। सुत्नु अघी उन्लाई कुनै सोर व ६ोरी ले हैन वने काका ले वएपनी मलिश गर्दिनु पर्थ्यो। मैले हुन्६ आन्टी वने।
काकी लम्पसर परेर सुत्नु वयो।(इन्केस्त साईट)। मैले काकी को मलिश गर्न सुरु गरे। काकी को कुर्त माथि फर्केको थियो। म अचम्म म परे काकी को सुरुवल उहको पुती नेर फतेको रहे६अ। काकी ले पन्तएे पनि लगाउनु वएको रहेन६अ। मैले कालो रौले झ्यप झ्यप्ती वारीएको काकी को कालो पुती देखे। पुती देख्ने बितिक्कै मेरो लदो पनि थन्कियो। मैले पातलो सुरुवल म काकी को गड मुसर्दै उहालैइ मलिश गर्दै थिए तर मेरो ध्यान कालो देखिएको काकी को कालो पुती म थियो”औन्ती कहाँ कहाँ मलिश गरिदिउ?” मैले सोधे। काकी आरम ले बोल्नु वयो।”पुर शरीर म गरिदे बाबु” मैले काकी को सप्र म पनि मलिश गर्न थाले।
एउटा कुर मलाई काकी को कालो पुती ६ुन मन लगेको थियो। कैले कही म काकी को कालो पुती को रौ ६ुन पुग्थे(शुबि)।तर काकी लाई पत्तो हुँदैनथ्यो। म काकी को पुती वारी पारी सुम्सुम्यौदै मलिश गर्दै थिए। काकी पनि मस्त हुनु वएको थियो।ककी ले वन्नु वयो”पख है बाबु म पेत को बल म घोप्तो पारी सुत्६ु, अनी मेरो गड धद म मलिश गरिदे है” मैले हुन्६ वने र इदे ले वने” आन्टी तपाईं सिरनी लाई पेत मुनी राख्नुस् जस्ले गर्द तपाईं को गड बेद म तसिदैन र म आरम ले मलिश गर्न सक्६ु” मेरो इदे उहको कालो पुती को निसन म केन्द्रित थियो। काकी ले तेसै गर्नु वयो। म काकी को गड बिच म पो बसे। काकी को कालो पुती मजले देखियो।
मैले मलिश को बहन म काकी को पुतिमा अलिकती औंला घुसए। काकी को पुती रसिलो वैसकेको रहे६अ। मैले आफ्नो कट्टु खोलेर आफ्नो बिशाल लदो निकले। अनी बिस्तारै काकी को कालो पुती लाई निसन बनाउदै काकी तिर मलिश गर्न धल्किए। मेरो लदो काकी को कालो पुती नजिक थियो। मैले काकी को धद मलिश गर्दै बिस्तारै लदो लाई काकी को पुती तिर धकेले। काकी को पुती रसिलो र गिलो वएको ले मेरो लदो को तेप्रो ६िर्यो। काकी अलिकती कप्नु वयो अनी बोल्नु वो”के गरेको बाबु?” मैले काकी को सुरुवल फतेको र त्यहाँ बाट काकी को कालो माल देखिएको अनी आफ्नो लिङ सन्केर एक्दुम उत्तेजित वएको सव वने। अनी काकी लाई बिन्ती गरे”प्लेअसे आन्टी! तपाईं को देखेप६ी मलाई नियन्त्रन गर्नै गर्हो वयो।” काकी लाई म पर्ती दाँया लाग्यो य जवन लदो को धक्क खान मन लाग्यो य उहको कालो पुती चिलयो खै कुन्नी वन्नु वयो” सिरनी पेत म राख्नु वन्द मलाई सन्क लगेथ्यो जे होश बाबु यो कुर कसैलाई नवन्नु।” मैले हुन्६ आन्टी वने।
अनी काकी लाई चिक्न थाले। मेरो लदो काकी को पुती वित्र पुर घुसे पनि तीन बाचा कि माउ मेरी काकी को कालो पुती म तिघ्त नै वएको थियो। मैले प६अदी बाट एसै गरी काकी को कालो पुती चिके। उहको पेत मुनी सिरनी हुनाले मलाई चिक्न सजिलो वएको थियो। हसो उथ्ने कुर के वने मैले काकी को सुरुवल पनि नखोली काकी को सुरुवल फतेको थौमा लदो लगेर उहको पुती प६अदी बाट नै चिकेर बिर्य निकले। काकी को पुती ले पनि बिर्य निकल्यो। टेश बेला काकी लाई मेरो लदो खुब मन पर्‍यो”बाबु को त खतरा रहे६ हतियर” काकी मुस्कौदै बोल्नु वयो”एती ठुलो पनि हुन्६ भन्ने सोछेकी थिन, हेर्दा सानो हुनुहुन्६ तर हतियर काका को वन्द ठुलो” काकी ले आफ्नो बेद म बिर्य पुषनु वयो र पुती पनि सफ गर्नु वयो।
मैले पनि वने”तपै को माल अझ पनि तिघ्त रहे६अ। कती सरो रौ हो ! एक्दुम कालो देखिने, मलाई खुब मन पर्‍यो आन्टी तपाईंको कालो माल” तेस बिहान् प६ी हर बिहान् मैले एसै गरी खुलेर काकी लाई चिके। अझ पनि म वकतिओन मनाउन काकी कहाँ नै जन्६ु। बिशेष गरी काका घर म नहुँदा मलाई जन मन लग्६ किन कि मलाई काकी सग रात वर रास लीला गर्न मन लग्६अ।
काकी को कालो पुती चिके काकीलाई चिकेको काकीसँग काल्ना को डिलमा कुमारी केटी कोदोबारीमा चीकेको खर्बुजाको जुस खैरेनीलाई चिकेको गलत नंबर गाउँले बहिनी गाउले भाउजु चाक चिकाइ चिकाई चिकेको कथा चिकाई Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)
May 28, 2015 admin	Posted in Nepali SEX Stories	Tagged १५ बर्से जवानी को आगो, अनिताको चाकमा पनि चिकियो, अन्टीलाई चिकेको, आइमाइको स्वाद, आफ्नै बाउले रन्डि बनायो, ईन्टरनेटमा भेटेको एस्तो पो चिकाइ, कलेज रोमान्स, काकी को कालो पुती चिके, काकीलाई चिकेको, काकीसँग काल्ना को डिलमा, कुमारी केटी, कोदोबारीमा चीकेको, खैरेनीलाई चिकेको, गाउँले बहिनी, गाउले भाउजु चाक चिकाइ, चिकाई चिकेको कथा, चिकाई प्याश, चिकेको कथा, चिकेको प्याश, जवनीको जोस, जवानी टाइट पुती, ठन्केको लाडो, डग्गी स्टाइल, डान्स रेष्टुरेण्टको डान्सर, दाजु बहिनि चिकेको, दिदीलाई चिकेको, दिपा भाउजु चिकेको, दुबइमा अन्टी लाई चिकेको, नाङ्गो फोटो, नितालाई चीकेको, नेपाली सेक्सी कथा, नेवारनी भाउजु sex story, पण्डितको बुहारी चिकेको, पण्डितको बुहारीको चर्तीकला, पत्रकारको बुढि चिक्दा, पत्रकारको सानी छोरी चिक्दा, पहिलो सेक्स, पार्बति पुतिको प्वल, पुतिमा हात, प्रियालाई चिकेको, बसमा चिकेको, बहिनीलाई चिकेको, बाथरुमबाट फर्केर आउँदा बिकासको लाडो, बिदेसमा पनि चिकेको, ब्लु भिडियो, भर्जिन केटि, भर्जिन केटिलाई चिकेको, भाउजु चिकेको, भाउजुलाई चिकेको, भाउजुसँग माइजुलाई चिकेको, मायालाई चिकेको, मालिस गर्दा चिकेको मिसलाई चिकेको, मेरी हट माईजु, मेरो चिकेको काहानी, मेरो जवानीको रंग मेरो पहिलो संभोग, मेरो पुतीमा चिकेको katha, मेरो यौनको पहिलो अनुभुती, म्यानेजर कि बुढि चिक्दा, यौन पत्र, रिमा भाउजु लाडो चुसिदीईन, लाडो तेतिकै ठन्केको ठन्केकै छ, लाहुरेकी बुढी चिकेको, साथीको आमालाई चिकेको, साथीको सेक्सी आमा, सानिमालाई चिकेको, सानिलाई चिकेको, सालीलाई चिकेको, सिस्टर चिकेको, सुनिता सेक्स पार्टनर, सोलुको चिकेको कथा, स्कुल होटेलको दिदी ११ बर्से केटो सङग चिकाउदा	Post Permalink
← Jacqueline Fernandez unseen hot bikini photos wallpapper	माइजुलाई चिकेको – Nepali sex story →
salman sex photos with bollywood heroin	Bollywood hero's lund ki pictures	Meri प्यासी चाची aunty ki kahani - hindi sex story	desi lund photo gallery	AISHWARYA RAI SEX PHOTO WITH ABHISHEK BHACHAN	indian heroine xxx fuck hot photo download	Lund ki photos download	Actress Madhuri Dixit pussy fucking XXX photos	Aishwarya fucked by salman khan XXX sex photos	marathi hot Actress Tejaswini pandit Nude Pictures	LATEST POST AND MOST LIKED	choot ki baar baar chudai raatvar free xxx mobile Audio sex